Somali - Settlement Services International
La hadal qof wax fahmaya.
Dhib miyey kaa heysata inaad la socoto inta lacag ah ee aad kharashgareynaysid? Ama inaad bixisid qaar ka mid ah biilasha ama aad cunto soo iibsato? Miyey kugu sii adkeynaysaa si aad u xakameyso khamaarkaaga?
La hadal qof wax fahmaya. Adeegyada Ka hortaga Dhibka Khamaarka Dadka dhaqamada badan leh waan kaa caawin karnaa inaad maareyso saameynaha khamaarka iyo inaan kaa caawino xiriirka qoyska iyo maaliyadaada.
Haddii aad ka welwelsan tahay qof kuu dhow adiga, sidoo kale waan ku taageeri karnaa.